काे हुन विनाेद तिवारी जसले अमेरीकन नेपालीहरूलाई आतंकित बनाए | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काे हुन विनाेद तिवारी जसले अमेरीकन नेपालीहरूलाई आतंकित बनाए
आफ्नो पिडा यसरी पोख्छनः देवराज न्यौपाने
प्रकाशित मिति १ फाल्गुन २०७५, बुधबार १०:४९ लेखक नेपाली जनता
म ग्रेटर अस्टिन नेपाली सोसाइटीको अध्यक्ष देवराज न्यौपानेमाथि एनआरएन प्रवक्ता भनिने विनोद कुमार तिवारीबाट पटक पटक अभद्र ब्यवहार हुन्छ जसको प्रमाण मैंले फेशबुकमै सार्वजनिक रूपमा लेखेका उनका कमेन्टहरुलाई फोटो खिचेर अध्यक्ष लगायत नेताहरुलाई पठाएर न्यायको याचना गर्दछु र यस्ता मान्छेहरुले एनआरएनलाई कता लैजालान् भनेर चिन्ता गर्दछु तर त्यसको बदलामा कुनैं रेस्पन्स कतैबाट आउदैन । कल ब्याक पनि हुँदैन र यो पुरानो कुरा एतिकै सेलाएर जान्छ । तर अहिले मेरो एउटा फेशवुक स्टाटसको बिषयलाई लिएर अध्यक्षले मलाई फोन गर्छन् र भन्छन् “के खोजेको ठिक लगाइ दिउँ ? तुरुन्त डिलिट गर्ने कि तिम्रा बिरुद्ध मुद्दा हालौं ?” त्यसपछि दोहर्याएर पढ्छु कतै मैंले अन्याय पो गरेछु की अन्जानमा भनेर ।
मैंले यसमा मुलत विवादमा नअल्झी एनआरएनको सदस्यता लिन आब्हान गरेको थिएँ र नेतृत्वलाई पनि बिश्वासको वातावराण बनाई दिन सुझाव दिएको थिएँ । मैंले कुरो बुझ्न नसकेपछि जसरी नेपालमा मानिसहरु राज्य कमजोर र अविश्वसनीय भए पछि न्यायको लागि रवी लामिछानेकहाँ पुगे झैं म पनि सच्ची मैनालीलाई आफ्नो दुख पोख्न पुग्छु । जसको परिणाम उनले यो घटनालाई न्यायको लागि आवाज उठाउदै बाहिर ल्याइदिन्छिन् र त्यसकै कारण फेरी उनीमाथि चौतर्फी हमला सुरु हुन्छ ।
मेरा निम्ति र एनआरएनलाई बिसुद्ध बनाउनका निमित्त लड्दा उनले अहिले जुन पिडा भोग्नु परिरहेको छ यसले मलाई पनि अझ बढी पिडा थपेको छ । यसरी एउटी पत्रकार माथि हमला हुन्छ, एउटा सामाजिक या एनआरएन अभियन्ता या एउटा नेपालीमाथि हमला हुन्छ र यसका बिरुद्ध कुनैं जिम्मेवार निकाय चुइक्क बोल्दैनन् भने यसले निराशा सिवाय केही दिदैन । यस्तो दण्डहिनता र अन्यायमा हामी कसरी सामाजिक काममा अघि बढ्न सकिन्छ? मलाई केही पत्रकार साथीहरुले फोन गरेर हामी तपाईका न्यायपूर्ण आवाजलाई साथ दिन्छौं भन्दा मैंले भनेको थिएँ, अहिले यो बिषयलाई धेरै नउछालौं । यसो भनिरहदा मैंले सोचिरहेको थिएँ कि यस्ता कुराले सदस्यता लिन मानिसहरुलाई नकारात्मक असर पर्छ र नेताहरुले आफैं महशुस गर्लान् र आफुलाई सच्याउलान भन्ने आशा थियो । म कसैसँग झगडा गर्न र झगडा लगाई दिन सामाजिक काममा लागेको हैन । तर मन लागेको कुरा बोल्दा ब्यक्तिगत दुस्मनी हुन्छ भने कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ?
यत्तिका संघ संगठनहरु र पत्रकार संघहरु अब त केही बोल्न पर्छ कि? किनकी मलाई लाग्छ यो हमला म र सच्चीजीमाथि मात्र हैन!
कहिले आउँछ २०७६ सालको पात्रो ? १३ पात्रोलाई मात्र स्वीकृति
काठमाडौं । विसं २०७६ का पात्रो (पञ्चाङ्ग) माघ १५ गतेभित्र प्रकाशित भई बजारमा आउने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जनाएको…
प्रहरीको बढुवा र पदाधिकारीमा यस्तो छ खेल
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी तय भएसँगै बढुवाको दौडधुप सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीमा तीन वटा मात्र…
यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सांसद, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखियाे !
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ४० सिट जित हात पार्ने देखिएको…
‘गन्धले थाहा पाउँछु, को मर्दैछ भनेर’
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाकी एक २४ वर्षीया मनोवैज्ञानिक युवतीले आफूले कसको मृत्यु कहिले हुन्छ भनेर पत्ता लगाउन सक्ने दाबी…
३ वर्षपछि टीकापुर घटनाका अभियुक्तलाई अदालत लगियो
कैलाली । टीकापुर घटनाको तीन वर्षपछि अभियुक्तहरुलाई अदालत उपस्थित गराइएको छ ।
पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका अभियुक्तहरुलाई बुधबार जिल्ला अदालत…
२ लाख खर्चेर साढे ९ लाख भुक्तानी
काठमाडौं । सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण गर्दा वनका कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएको छ । मोरङ खण्डमा पर्ने चारकोसे जंगलको लक्ष्मी…
सेक्स गर्दा किन आवाज निकाल्छन् महिला ? 292 views
नेपाली सेनाका जर्नेल, कर्नेलका घरघरबाट ‘अर्दली’हरु फिर्ता गर्न निर्देशन 206 views
महिलालाई यौन सम्पर्कको लागि तयार पार्ने यी ११ अंग ! 82 views
दिनमा एक पटक यौन सम्पर्क नगरी बस्न नसक्ने १८ वर्षीया युवतीको व्यथा 81 views